Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Turkish Airlines na Pegasus ụgbọ elu malitere ndokwa ụgbọ elu Kazakhstan
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Kazakhstan na -agbasa • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Turkey na -agbasa News • Akụkọ dị iche iche
ụgbọ elu Turkish abụọ na-ebido ọrụ ikuku ụgbọelu na Kazakhstan.
Turkish Airlines ga-agba ụgbọ elu ọhụrụ n’ụzọ Turkestan-Istanbul-Turkesta
Pegasus ụgbọ elu ga-amaliteghachi njem ụgbọ elu n'etiti Shymkent na Istanbul
Boeing 737 na Airbus A320 ụgbọ elu ga-eji na ụzọ Kazakhstan
Mịnịsta na-ahụ maka nrụpụta ihe na akụrụngwa nke Kazakhstan kwupụtara na ụgbọ elu Turkish abụọ na-ebupụta ikuku ụgbọelu na Kazakhstan.
Turkish Airlines bụ ịgba ọsọ ụgbọ elu ọhụrụ na-aga Turkestan-Istanbul-Turkestan malite na Mee 22, 2021. Na mbido, a ga-agba ụgbọ elu ahụ otu ugbo n’izu iji ụgbọ elu Airbus А321neo.
Pegasus Airlines ga-amalite njem ụgbọ elu dị n'etiti Shymkent na Istanbul na-agba otu ugboro n'izu iji ụgbọ elu Boeing 737 na May 23, 2021.
Turkish Airlines bụ mba ọkọlọtọ ụgbọelu ụgbọelu nke Turkey. Ọ na-arụ ọrụ ndokwa maka njem 315 na Europe, Asia, Africa, na America, na-eme ka ọ bụrụ onye na-ebu ụgbọelu kachasị ukwuu n'ụwa site na ọnụ ọgụgụ ndị njem.
Pegasus ụgbọ elu bụ ụgbọ elu Turkish dị ọnụ ala nke isi ya dị na mpaghara Kurtköy nke Pendik, Istanbul nwere ntọala n'ọtụtụ ọdụ ụgbọ elu ndị Turkey.
Ụgbọ elu Kazakhstan Pegasus Airlines Turkish Airlines